China Capsule tavoahangy PET Green orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Qianduo fonosana
Amin'izao fotoana izao dia olona maro no hisaina ny fotsy voalohany rehefa misafidy ny lokon'ny tavoahangy plastika. White dia tena marobe ary azo ampifanarahana amin'ny loko hafa. Na izany aza, maro ny olona manantena fa ny lokon'ny fonosana vokatra dia ho mavitrika sy manankarena kokoa. Green koa dia loko iraisana ary mahazo aina kokoa. Olona maro no mitovy amin'ny fofona maintso sy voajanahary amin'ny maitso, saingy sarotra ny mahazo ny collocation loko afa-tsy ny maitso amin'ny tavoahangy plastika. Ao amin'ny fampifanarahana loko amin'ny tavoahangy fonosana sy marika, maro ny olona misafidy ny hifanaraka mifanaraka amin'ny safidiny manokana. Azo lazaina fa "ny radia sy ny legioma dia samy manana ny tiany", ary ny mpampiasa dia hisafidy ny loko tsirairay. Na izany aza, raha ny fahitana ny safidin'ny tena manokana dia mila mandinika ny hatsarana sy ny fiononana isika.
Inona no loko itovizan'ny maitso?
Anisan'ireo loko rehetra, ny maintso dia iray amin'ireo sarotra indrindra hampifanaraka azy. Ny lalao tsara dia hahatonga ny tavoahangy fonosana ho velona, ​​tanora sy velona, ​​miaraka amin'ny fahatsapana ny fihavaozana voajanahary. Raha tsy tsara ny lalao dia mora manjary mikorontana. Mety kokoa amin'ireto loko ireto ny maintso: - 1, fotsy: maintso misy fotsy ny andro, ka raha mihena, dia hahatsapa ho madio, mamiratra, kanto ary misy rahona fotsy, ambanin'ny maintso; 2, mainty: ny maitso maivana dia an'ny rafitra maizina, ary ny mainty koa an'ny rafitra maizina. Noho izany, ny roa mitovy loko dia hahatonga ny olona hahatsapa ho mahazo aina. Ity karazana lalao ity dia hahatsapa ho manetriketrika; 3, volondavenona: efa nilaza fa fotsy ny loko, ny loko rehetra mety hitovy volondavenona, miankina amin'ny fomba anaovanao izany. Noho izany, ny volondavenona dia azo ampiasaina amin'ny hazavana maintso, atmosfera ihany koa; 4. Mena: ny maitso koa afaka mifanitsy amin'ny mena. Mazava ho azy fa tokony hampifanarahana amin'ny mena maivana izy fa tsy ny mena lehibe. Ny lokon'ny natiora dia maitso sy mena, izay somary milamina sy voajanahary; 5, mavo maivana: ho an'ny maintso, miaraka amin'ny mavo maivana, dia tsara bika ihany koa. Amin'ny loko avana fito, maitso sy mavo an'ny an'ny afovoany, ary hahatsapa izy ireo fa mamiratra sy miara-mihetsika.
Teo aloha: Capsule tavoahangy PET Brown
Manaraka: Capsule tavoahangy mena mena